Statement | Network for Chin Community Development
CHIN FARMER NETWORK
( C . F . N )
အစိုးရ စစ်တပ်မှ ချင်းတောင်သူများ မတရား နှိပ်စက်မှုအပေါ် ချင်းတောင်သူများကွန်ယက်၏
၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ၂၉ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလက်ဝမြို့နယ်၊ကုန်ပြင်ကျေးရွာမှ တောင်သူများသည် မြန်မာ့တပ်မတော် ခမရ (၃၄၄) မှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကာ တောင်ယာတဲနှစ်လုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ တောင်ယာစပါးများ ရိတ်သိမ်းခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုး နှောင့်ယှက်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတို့ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တောင်သူ(၆)ဦး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့သည်ကို သက်ဆိုင်ရာမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမှု မရှိခြင်းသည် ချင်းပြည်ရှိတောင်သူများ၏ ဘ၀လုံခြုံမှုမရှိခြင်းကို ပြသနေပါသည်။
စက်တင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့တွင် ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်ဝင်းဦးဆောင်သည့်ထရွန်အိုင်အခြေစိုက် စစ်တပ်များသည် ကုန်ပြင်ရွာသို့ ရောက်လာပြီး တောင်သူများအား စစ်တပ်မှ ဖမ်းချုပ်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုတစ်စုံတရာ မျှမပြုလုပ်ကြောင်း အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းသည့်လုပ်ရပ်အပေါ် ချင်းတောင်သူများကွန်ယက်မှ အပြင်းအထန် ရှုတ်ချသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည် ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်သား(၃)ဦးကို ဒေသခံခူမီးရိုးရာကောက်သစ်စားပွဲသို့ လက်ခံကျွေးမွေးထားခြင်းကြောင့်မြန်မာ တပ်မတော်ဖက်မှ ဒေသခံ တောင်သူများအပေါ် နှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့အပြင် ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦးနှင့်မြန်မာ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဒေသခံတောင်သူများသည် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ကိုင်စား သောက်နိုင်တော့မည်ဟု မျှော်လင့် နေခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့ချိန်အထိ ချင်းပြည်သူတို့၏ဘ၀မှာ လွတ်လပ်လုံခြုံမှုမရှိပဲစစ်တပ်မှအမျိုးမျိုးညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ခြိမ်း ခြောက်ခြင်း များ တွေ့ကြုံနေရဆဲဖြစ်သည်။
၁။ ခမရ (၃၄၄) မှဗိုလ်မှူးတင်ထွဋ်ဦးနှင့်အဖွဲ့အား ထင်သာမြင်သာရှိသည့်အရေးယူပေးရန်၊
၂။ ဒေသခံတောင်သူများ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးထားသည့်တောင်ယာခင်းများအတွက်ထိုက်တန်သောလျှော်ကြေးပေးရန်၊
အစိုးရအား အလေးအနက် တောင်းဆို သည်။
ပူး တျာလ် ဒွန်း၊ ဥက္ကဌ၊ ဖုန်း ၀၀၉၁၉၄၀၂၁၉၁၅၇၇
ပူး ဘင်ဂျမင်၊ ကိုသြဒီနေတာ၊ ဖုန်း၀၀၉၁၉၈၅၆၄၂၃၆၂၃
Chin Farmers Network ဖွဲ့စည်းခြင်း သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၅) ရက်နေ့
၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၅-၇ အထိ အိန္ဒိယ – မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကျေးလက်ဒေသနေ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၃၀ ခန့် တက် ရောက်သည့် ချင်းတောင်သူများ၏ တောင်သူများ ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲက Chin Farmers Network ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
Chin Farmers Network ၏ ရည်မှန်းချက်အဖြစ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တောင်သူဘ၀ တည်ဆောက်ရန်၊ ဦး တည်ချက်အဖြစ် တောင်သူလယ်သမားများ၏ လူမှုဘ၀ကို ထိခိုက်နစ်နာစေသော လုပ်ဆောင်ချက်များမှ ကာကွယ် ရန်နှင့် တောင်သူလယ်သမားတို့၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရန် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ရန် ဟူ၍ ချမှတ်ကြသည်။
Network for Chin Community Development ပံ့ပိုးမှုဖြင့် Workshop on Chin Farmers Network ကို ပြုလုပ် ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ချင်းကျေးလက်တောင်သူများ၏ လက်ရှိအခြေအနေ၊ လူထုအခြေခံသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအာဏာလျှော့ချရေးနှင့် လက်ရှိအစိုးရ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာများကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ချင်းပြည်နယ်အတွက် ပြည်ထောင်စု၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေး ဘတ်ဂျက်သည် ကျပ်သန်းပေါင်း ၈၄၀၀၀ ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် JICA မှ ချင်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အတိုးမဲ့ ချေးငွေကိုလည်း အတိုးနှုန်းဖြင့် အာဏာပိုင်များနှင့်နီးစပ်သော ဆိုင်သည် အသိုင်းအ၀ိုင်းများကိုသာ ချေးပေးကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ထိုကိစ္စများအပေါ် မိမိတို့အနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အစိုးရအားလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအားလည်းကောင်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
Chin Farmers Network ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် Chin Farmers Network အင်အားတောင့်တင်းရေးအတွက် ကျေးရွာအဆင့် တောင်သူလယ်သမား အုပ်စုများကို အခြေခံဖွဲ့စည်းပြီး တောင်သူများထံ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် အသိ ပညာပေးရေးဟူ၍ ချမှတ်သဘောတူကြသည်။
Chin Farmers Network ၏ Leading group ကို မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း ကွန်ယက်များမှ ခေါင်း ဆောင် (၇)ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဥက္ကဌ အဖြစ် ပူး တီယာလ်ဒွန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။
Pu Nang Za Eng, Vice President, Ph: +919856426067
Mr Simon, NCCD, Ph: +918731914701
Letter of felicitate to Pu Peter and Pi Suikuk’s wedding ceremony on 24 October, 2013
ချင်းပြည်နယ် တ၀ှမ်းရှိ ရွာသူရွာသားများမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် ပိုမိုရရှိစေရန် တောင်းဆိုခြင်း
NETWORK FOR CHIN COMMUNITY DEVELOPMENT.
P.O Box(94), Main Post Office, Aizawl – 796001, Mizoram State, INDIA,
ရက်စွဲ။ ။ ဇူလိုင်လ (၁၇)ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
Villagers throughout Chin State call for increased participation in development process
NETWORK FOR CHIN COMMUNITY
P.O Box(94), Main Post Office, Aizawl – 796001, Mizoram State, INDIA, E-mail <nccd.chinland@gmail.com>
Over 100 villagers from 41 villages who joined in community development dialogues in northern, central and southern Chin State have called for increased participation in development programs.
The Network for Chin Community Development held three community development dialogues, from June 21–22, 2013 at Ngente village in Teddim township of northern Chin state, from July 3-4, 2013 at Karamit village in Paletwa township of southern Chin state, and July 12-13, 2013 at Bel Haar village in Thantlang township of central Chin state. 108 participants from 41 villages in cooperation with NCCD discussed their community development projects, their customary land ownership and management system, current development projects and political change in Burma.
Currently in Chin state, the government and various companies are cooperating to implement various large-scale development projects, including the Mwe Taung nickel mining project, the Lemro dam project, the Kaladan multi-modal project, the Nah Ma Taung national park project and the Manipur dam project, without regard for the concerns of local people.
The current constitution does not recognize traditional systems of land ownership, and farmlands that have been in families for generations are being confiscated without compensation. This is making it difficult for local Chin people to survive.
Many national NGOs and international NGOs who have entered Chin state to help the people are failing to respect the principles of people’s participation, sustainability and grassroots ownership in their programs. Their programs are top-down, and risk creating dependency among the Chin community.
The current Village and Administration Act limits people’s freedom, requiring them to seek permission and to ask for recommendations from the police, village or quarter administrators before carrying out any activities.
Therefore, in order to protect and benefit the people, we strongly urge the government to:
Implement projects according to the principle of Free Prior Informed Consent (FPIC) which is enshrined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Amend the constitution so that it recognizes customary land ownership and customary land management systems which have been applied for generations by Chin people.
Guarantee in the constitution the rights of participation, sustainability and ownership of grassroots people within development processes
Allow civil society organizations and other social groups to move freely and carry out activities without restriction.
See on www.khonumthungburmese.org and www.nccdburma.wordpress.com
NCCS ၏ ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ကျေညာချက်
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၀၁ ရက်နေ့
Network for Chin Civil Societies (NCCS) ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ချင်းပြည်နယ မြို့တော်ဟားခါးတွင် ၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ ၃၀ – ၃၁ ရက်အတွင်းကျင်းပခဲ့ကြရာ အစည်းအဝေးမှNCCS ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ချင်းပြည်သူလူထုဆုံးရှူံးနေသော မွေးရာပါ အခွင့်အရေးများ၊ချိုးဖောက်ခံနေရသည့် အခွင့်အရေး များကိုဖော်ထုတ်ပြီးအမှန်တရားဖက်မှ ရပ်တည် ကာအစိုးရ၊ ချင်း ပြည်သူလူထု နှင့် စီအဲန်အက်ဖ် အကြားထာဝရတည်တံ့သည့်စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ရန် ဟူ၍ ချမှတ်သည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ် ချင်းတမျိုးသားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုအင်အားဖြင့် ထာဝစဉ်တည်တံ့ငြိမ်းချမ်သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့်ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်သစ်ကို တည်ဆောက်ရန် သဘောတူချမှတ်ကြသည်။
NCCS သည် ပြည်သူ့အ ကျိုးပြု လူမှု အသင်းအဖွဲ့များ၊ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံပြီး ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်သည်။NCCS သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း များ၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများအားအသေးစိပ်လေ့လာပြီး ပြည်သူလူထု လက်ခံသော ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာရေးကိုအစဉ်တစိုက် အလေးထားဆောင် ရွက်သွားရန် ကျေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ရသည်။
Peace Process and Mega Development Statement.
Workshop on Peace Process and Mega Development
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့
NCCD မှ ကမကထပြုပြီးကျင်းပသည့် Peace Process and Mega Development အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ (၂၉) ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့အထိ အိန္ဒိယ – မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်တွင်း ချင်း လူမှု အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် Coordinator ဦးဆောင်မှုစနစ်ဖြင့် Network for Chin Civil Societies ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် Peace Monitoring, Community awareness တွေကို လုပ်ဆောင်သွားရန် ချမှတ်ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဖော်ဆောင်နေသော ထာဝရတည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်း ချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု သဘောသဘာဝ၊ ဦးတည်ချက်၊ စီစဉ်မှုများအား သုံးသပ် ဝေဖန်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ သည် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို မည်သို့ ဖော်ဆောင်သင့်သည်ဟူသောမူများကို ဆွေးနွေး ချမှတ် ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း များအား ပါတီထူထောင်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား လက်ခံရန်နှင့် ပြင်ဆင်လိုသည့် ကိစ္စများ ကို လွှတ်တော်အတွင်း အများ သဘောတူ ဆန္ဒ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရေး၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဥပဒေဘောင် အတွင်းသို့ အပြီးအပိုင်ဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ တန်းတူ ရည်တူ နေထိုင်သွားလာ လုပ်ကိုင်စား သောက် ရေး၊ ဖွံ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ တခုတည်း သော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသွင် ကူးပြောင်း ရေးကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး ဟူသော အချက်အတိုင်း (တရားသေ စွဲကိုင်ပြီး) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည် ဆိုပါက ထာဝ ရတည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်ပေါ် လာမည်မဟုတ်ဟု ထင်မြင်သုံးသပ်ပါသည်။
အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာကို နိုင်ငံရေးအရ အာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွင် ကျင်းပပြီးစီးပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူပြီး လက်ရှိအစိုးရစွဲကိုင်ထားသော ဒို့ တာဝန်အရေးသုံးပါးအပြင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆိုသော ပြည်ထောင်စု အရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး စသည့် ဖက်ဒရေ အခြေခံမူများကို စုစည်း လျက် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအား လုံးပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက် ကို လက်ရှိ အစိုးရ၏ လွှတ်တော်ပြင် ပတွင် ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှု ရယူ သင့်သည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ခေါင်းစဉ်အောက် ပြုလုပ်သောငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို သုံး သပ်ကြည့် ရာတွင် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုသည် နောက်ဆုံးထား ပြုလုပ်ရမည့်အနေအထားဖြစ်နေပါသဖြင့် လက်ရှိ ပြုလုပ်ရမည့် ဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံကိန်းများအပေါ် အထူးစိုးရိမ်မိသည်။ ချင်းပြည်အတွင်းရေကာတာများ၊ သတ္တုတွင်း များ၊ အမျိုးသား ဥယျာဉ်နှင့် ဘေးမဲ့တော စီမံ ကိန်းများအပြင် ကုလားတန် ဖက်စုံသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းများကို ပြည်သူလူထုဆန္ဒအရ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုမပြုပါက ပြည်သူလူထုအတွက် ကြီးမားသော အန္တရာယ် ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ချင်းပြည်အတွင်း လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်နေသော အထက်ဖော်ပြပါ စီမံကိန်းများ သည် ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှု မရှိခြင်း၊ ပွင်းလင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအရ ဒေသခံများ၏ နစ်နာ မှုများကို လစ်လှူရှုနေခြင်းများကြောင့် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုမပြုရန်တောင်းဆိုပါသည်။
လက်ရှိ ငြိမ်ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကာလတွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များ အ နေဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်မည်ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါဖွံ့ဖြိုး ရေး ဆိုင် ရာ မူသုံးချက်အပေါ် အခြေခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည် ဟု ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
၂။ ပြည်သူလူထု အတွက် လက်တွေ့ကျပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃။ ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လုပ်ဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
K. Hlathun Phone: +919612743156 E-mail: hlathun@gmail.com, nccd.chinland@gmail.com
Mai Vel Tha Chin, Coordinator of NCCS, Phone: 07022015, Email: rem.velpi@gmail.com